PlaceIt: Awesome Screenshot App, Anotyisa mitengo | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 26, 2014 Mugovera, June 13, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichitsvaga kuti titore yakanaka pikicha yeemail yedu pane iyo iPhone mune inoyevedza marongero. Pandakaitika mhiri NzvimboIt, Ndakafadzwa zvisingaite. Iyo webhu kunyorera ine dzakasiyana siyana mifananidzo iri nyore kusefa, uye zvinongova zvakapetwa zvishoma kuisa yako skrini uye kuigadzirisa. Iyo app inotora kubva ipapo uye inonyatso gadziridza iyo kona uye mwenje kuti iise iyo skrini musono mumufananidzo.
Izvo zvese zvaive zvakanaka uye zvakanaka kusvika ndadzvanya Download kutenga mufananidzo. Mari yekupa marezinesi ndeyekupenga… ichinyanya kuda kuti nditenge mufananidzo mumwe chete, wepamusoro-soro we $ 85 kubvira chero ipi guru saiti - inotsanangurwa pamusoro pevashanyi vanopfuura chiuru pamwedzi - inoda yavo rezinesi rekutengesa rakawedzerwa. Zvakakomba ... chiuru chekuona pamwedzi nzvimbo hombe? Kudzvanya pane chero ehurongwa hwemwedzi nemwedzi kunopa chete rezinesi rekutengesa (chiuru chete chevashanyi pamwedzi).
Kutaura chokwadi, ndingave zvirinani kubhadhara munhu ane hunyanzvi wekutora mifananidzo uye ndiine pikicha yemazana mashoma emadhora uko kwandinogona kuwana mashoma gumi nepfuti ese ari angu uye anogona kushandiswa chero kupi nguva chero nguva. Kusvikira panguva iyoyo, ini ndave kurodha pasi mufananidzo kubva kwatiri mutsigiri, Depositphotos… Uye akawedzera skrini yedu pairi pasi pemadhora mashanu nekushandisa kusingagumi!
Tags: iphone fotonzvimboscreenshot apppiritsi pikichaweb screenshots
Hondo: Wireframing Kuwedzeredza Kwe Illustrator CC / CS5 +
CEO yenzvimbo pano… Kune vabloggi - unogona kushandisa rezinesi remahara pasina chero miganho zvachose. Iwe hausi kutarisa rezenisi rakakodzera remhosva yako yekushandisa.
Kutenda @navidash: disqus. Ini ndanga ndisingataure nezvekushandisa kwema blogger, ini ndanga ndichireva nezve kushandiswa kwekutengesa. Zvakadaro zvakachipa kudhura kwandiri kuti ndive nepikicha yepikicha ine nyanzvi yemifananidzo.
Kutenda nemhinduro. Kungove kujekesa: Zviri 1000 zvimiro pamwedzi, zvachose.
Mhoro! Unogona kuedza http://www.picapp.net. Inokurumidza & isingadhuri uye iwe unogona kugadzira boka rechitonho chigadzirwa screenshots. Mufaro!